विश्वराज पछल्डङ्ग्या ,?????
२०७७ फाल्गुण २६ बुधबार २१:३४:००
विश्वराज पछल्डङ्ग्या, ?????
नेपालगन्ज रंगशालामा रहेको पौडीपोखरीको तेस्रोपटक उद्घाटन भएको छ । यसअघि नै दुईपटक उद्घाटन भइसकेको पौडीपोखरीको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले बुधबार तेस्रोपटक उद्घाटन गरेका हुन् ।
यसअघि सिलवालले नै १ चैत, ०७६ मा दोस्रोपटक पौडीपोखरीको उद्घाटन गरेका थिए । उनीभन्दा अघिका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले ६ असार ०७६ मा पनि पौडीपोखरी उद्घाटन गरिसकेका थिए ।
पछि पौडीपोखरी सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने तयारी भएको थियो । उनले आफैँले उद्घाटन गरेको पौडीपोखरीको २६ फागुन, ०७७ मा दोस्रोपटक उद्घाटन गरे । चारवर्षे कार्यकाल सकिन केही दिन मात्रै बाँकी भएका वेला उनले पौडी पोखरीको उद्घाटन गरेको एक कर्मचारीले बताए । ‘बिदाइ हुनेवेला भइसकेको थियो । त्यहीवेला राखेपका तत्कालीन सदस्यसचिव विष्टले उद्घाटन गर्नुभएको थियो,’ ती कर्मचारीले भने ।
तेस्रोपटक उद्घाटन गर्ने क्रममा सदस्यसचिव सिलवालले दोस्रोपटक उद्घाटन गर्ने अवसर दिएकोमा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिलाई धन्यवाद दिएका छन् । उनले नेपालगन्ज खेलाडी उत्पादनको उर्वरभूमि भएको र पौडी विधाबाट नेपालगन्जलाई चिनाउन पौडी पोखरीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।
नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पौडी विधामा सहभागी हुने खेलाडीका लागि निःशुल्क प्रशिक्षण लिने व्यवस्था मिलाउन उनले क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिलाई निर्देशन पनि दिए । ‘नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पौडी विधामा सहभागी खेलाडीको नाम संकलन गरेर प्रशिक्षण लिन चाहने खेलाडीलाई निःशुल्क तालिम लिने व्यवस्था मिलाउनुस्,’ सदस्यसचिव सिलवालले भने ।
#नेपालगन्ज रंगशाला # पौडी पोखरी # रमेशकुमार सिलवाल